Nhau - Kuongorora kweWower Power Gear Kurongeka Kwezvikwata
Kutenderera kweGear ndiyo inonyanya kukosha nzira yekufambisa kufamba uye simba mumagetsi emagetsi emagetsi. Kushanda kwaro kushanda, kutakura kugona, hupenyu hwebasa uye kushanda kwakaringana zvine hukama nehunhu hwekutapurirana kwegear. Hutachiona hutachiwana hwegiya hutachiwana hunonyanya kutsamira pakurongeka kwekugadzira kweiyo giya pachayo uye kunyatso kumisikidza kweiri giya.
Kurongeka kwekutakurwa kwegear mumagetsi emagetsi emagetsi anokwanisa kupfupikiswa muzvinhu zvina zvinotevera.
Kururamisa kwekufambisa kufamba
Izvo zvinodikanwa kuti iyo yakanyanya angle kukanganisa kweiyo giya mukati meimwe shanduko inogumira kune imwe nhanho kudzora shanduko yeiyo yekutapudza chiyero pakati pechikamu chinotyairwa uye chikamu chekutyaira mukati meimwe shanduko; iko kukanganisa kunokanganisa iko kurongeka kwekufamba ndiko kukanganisa kwenguva refu, mazhinji acho ari Zvikanganiso zvinokonzerwa nejometric eccentricity uye kufamba eccentricity, kunyanya kusanganisira radial runout, kuwedzeredza kutsauka kwakazara kwezino kukanda uye kuwedzeredza kutsauka kwemazino tarira yekuongorora zvinhu;
Ita shuwa kuti chiyero chekutapurirana chinoshanduka pane imwe nguva yekufambisa kwegear ishoma kudzikamisa kudedera uye ruzha; zvikanganiso zvinokonzeresa kutsetseka kwekufamba zvinonyanya kuve zvipfupi-nguva zvikanganiso, zvakakwirira-frequency zvikanganiso uye chishandiso zvikanganiso zvemuchina chishandiso chekufambisa cheni, kunyanya kusanganisira zino kutsauka kutadza;
Kufanana kwekuparadzirwa kwemutoro
Izvo zvinodikanwa kuti zino pamusoro pekusangana yakanaka kana giya rikaiswa meshed, kuti isakonzere kushushikana kushushikana, izvo zvinowedzera kusarura kupfeka kwezino uye kukanganisa hupenyu hwebasa regiya; iko kukanganisa kunokanganisa kufanana kwekuparadzirwa kwemitoro kunonyanya kutsauka kwemhepo;
Kufunga kwekutapurika backlash
Kana magiya arikubatikana, panofanirwa kuve nemukaha pakati peasina kushanda mazino. Izvo zvinodikanwa kuti uchengetedze mafuta ekuzora, kubhadhara iyo elastic deformation uye kupisa kwekuwedzera kweiyo giya kufambisa mushure mekusimbiswa, pamwe nekanganiso yekugadzira uye kukanganisa kwegungano rekutakurwa kwegiya. Zvikasadaro, magiya anogona kunamatira kana kupiswa panguva yekuita meshing.
Kiyi Hook Murongi, Simbi Madziro Art, Bhachi Hanger Rack Hooks, Makiyi Ekubata Hook, Dyara Pot Hanger, Wall Hanging Kudyara Bhureki,